Dugsiga Hoose (K-5) Xarunta Warbaahinta | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Ujeeddada barnaamijka Warbaahinta ee Minnetonka waa in la hubiyo in ardayda iyo shaqaaluhuba ay si wax ku ool ah u adeegsadaan fikradaha iyo macluumaadka; si loogu xoojiyo ardayda inay noqdaan mufakiriin muhiim ah, akhristayaal xamaasad leh, cilmi baarayaal xirfad leh, iyo adeegsadayaal anshax wanaagsan. Khabiirro warbaahineed oo la aqoonsan yahay ayaa ka shaqeeya xarun kasta oo warbaahineed, iyagoo bixiya adeegyo kala duwan.
Waxaan bixinaa khibrado barasho oo ku lug leh baahiyaha shaqsi ee meelaha:
o Dhalashada Dijital ah / Caafimaadka & Fayoqabka Dijital ah
o Mahadnaq Akhris / Qoraal Saxaafadeed
o Hufnaanta Macluumaadka Cilmi-baarista
Hawlaha Tiknoolajiyadda / Fikradaha
Waxaan ardayda barnaa oo ka caawinnaa barayaasha adeegsiga, qiimeynta, iyo soo saarista macluumaadka iyo fikradaha iyadoo la adeegsanayo qalab ballaaran oo ku habboon, agabyo, iyo teknolojiyada macluumaadka.
Waxaan ku siineynaa helitaanka agabyada nooc walba, oo ay kujiraan casriyeyn, tayo sare, suugaan kaladuwan si loo hormariyo loona xoojiyo jacaylka aqriska.
Waxaan siinaa ardayda iyo shaqaalaha edbinta iyo ilaha ka tarjumaya baahiyaha macluumaadka ee hadda jira oo aan saadaalineyno isbeddelada tikniyoolajiyadda iyo waxbarashada. Waxaan door muhiim ah ka ciyaareynaa maareynta iyo dayactirka kheyraadkan.
Waxaan u adeegnaa sidii illaha waalidiinta iyo xubnaha bulshada si aan si fiican ugu taageerno guusha ardayda ee guriga iyo dugsiga.
Dhammaan dugsiyadeenna hoose ee Degmadeennu waxay leeyihiin xarumo warbaahineed oo ku qalabaysan kombuyuutarro, meel wax lagu barto, iyo xulasho kala duwan oo suugaan ah si ay ugu habboonaato dhadhanka, heerka akhriska iyo baahida luqadeed ee dhammaan ardayda.